यो कथा होइन, सत्य घटना हो (स्व. मामा राममणि ज्ञवालीमा समर्पित)
रातको प्रहर छिप्पिएपछि ४०\_५०जना मानिसहरुको हातहतियार सहितको जत्थाले घर घेर्यो। एकले आदेश दियो ढोका फोरि दे । भित्रबाट आवाज आउछ 'को आउनुभयो यति राति ?' सायद रातको पाहुना होला भनेर ढोका खोल्न पुग्छन्।
'बाध् यसलाई बाध् यहि मैनीखावाँमा नाङ््गै बनाएर बाध्' एकले आदेश दियो। बाझले कुखुरालाई झम्टीए गुरिल्लाहरूले, मदानी माडोरि बेरे जस्तै बेरिदिए मैनीखावाँमा। राम भन्दै 'थिए मैले के गल्ति गरेको थिएं र , 'मलाई यसो गर्दै हुनुहुन्छ ?'
' यसलाई टुक्राटुक्रा पारेर मर्नुपर्छ' अर्कोले आदेश दियो । 'काटी दे यसका हातहरु 'अर्कोले आदेश दियो ।
रगतका पिचकारीहरूले उसको मुख र शरिर भरि हानी रहेको थियो। कठै मेरो मामा ऐया भनेर कराउन पनि पाउनु भएन। उसले हानी रयो, हानी रयो धेरै पटकको प्रयत्नपछि हात छिनाली दियो।
छोड लाठेम छिन्छु यसको अर्को हात अर्को तम्सियो ।लाग्थ्यो उनीहरु मानिस काटमार गर्ने खेल खेलिरहेछन। ४ (५ पटकको लगातार प्रहार पछि दोश्रो हात पनि छिनालियो ।
रामको स्थिति बर्णन गर्ने मसंग कुनै शब्द छैन, न त साहसनै , न त म कल्पनै गर्न सक्छु ।मेरा लेख्ने औलाहरू लरखराइ रहेका छन् । सोच्ने मष्तिक धमिलिएको छ। दुई हात काटिएको रक्त्याम पिडाले छटपटाईरहेको जिउदो मानव बिबस, निषाहय , मृत्युको भिख मागिरहेको मानव , न त रुन सक्छ न कराउन ।
यस्तो दर्दनाक स्थितिमा अर्को गुरिल्ला कुर्लियो , यसलाइ चिरि मार्नुपर्छ , नभन्दै एउटा तम्सियो र धारिलो चक्कुले त्यो कोमल अनुहार चिराचिरा पारिदियो ।
क्रुरताले सिमाना घीसकेको थियो, त्याहा क्रुरताको प्रतिस्पर्धी खेल खेलिदै थियो , निसाहय विवश मानब माथी। अर्को कुर्लियो यसको खुट्टा पनि गिड्दे । यो क्रुरताको दानविय खेल त्यती बेला सम्म खेलियो, जब सम्म उसको शरिरमा स्वास थियो।
यदि यहि घटना हाम्रा पार्टीको नेताहरुको परिवारमा घटेको भए के उनीहरू चुप लागेर बस्न सक्थे ? यदि यहि घटना तपाईको परिवारमा घटेको भए ? आज मेरो मामाजस्ता हजारौ निरपराध जनताको रगतलाई मसि बनाएर आ\_आफ्नो स्वार्थको लागि र तिनै अपराधीसंग कुम मिलाएर राज गर्न १६ बुदे सहि छाप गर्ने सबै नेता र पार्टीहरु अपराधीहुन् । आदेश दिने,अपराध गर्ने र अपराधीलाई समंरक्षण गर्ने राज्यको लागी सबै नै अपराधी हुन्। जुन राज्यले अपराधीलाई सजाय दिन सक्दैन त्यस राज्यलाई स्वतन्त्र राज्य भन्न सकिदैन।